Soo dejisan Ask.fm 3.2 – Vessoft
Soo dejisan Ask.fm
Ask.fm – macmiil ah shabakad bulsho caanka ah ee su’aalaha iyo jawaabaha. Ask.fm kuu oggolaanayaa in aad wax si qarsoodi ah ama adiga ku matalaya gaar ah su’aalo si dadka kale ee oo ka jawaab-su’aal counter. Software ayaa awood u nalugu users kala duwan iyo u arkaan ama u qiimeeyaan jawaabahooda su’aalaha. Ask.fm kuu ogolaanaya in aad ku lifaaqdo kala duwan ee images, links iyo sawiro si ay su’aalo. Sidoo kale software ka taageertaa search saaxiibbaday ka diiwaan gashan shabakadaha kale ee bulshada. Ask.fm awood u si weyn u economize gaadiidka iyo leeyahay user saaxiibtinimo interface.
Awoodda si aad u weydiiso su'aalaha si qarsoodi ah
Farriimaha pop-up ku saabsan su'aalo cusub
Rukun si aad u akhriso taariikhda kooban ee dadka kale ee
Lifaaqa of images su'aalaha
Isku dhex leh shabakadaha bulshada caan
Comments on Ask.fm:
Ask.fm Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... SHAREit 3.5.48_ww